'भगवान शिव, बुद्ध र माता सीताको देशका हामी आफ्नो संस्कृति किन भुल्दैछौं ?'
'नेपाल एउटा यस्तो पवित्र भूमि, जहाँ पशुपतिनाथ छ । जहाँ बुद्धको जन्म भयो । जुन देशमा सीता माता जन्मिनुभयो, त्यस्तो देशमा हामीले संस्कृति भुल्दैछौं ।
भौतिकवादमा रमाइरहेका छौं,' पूर्व सभासद एवं चर्चित उद्योगी विमल केडियाले यसो भनिरहँदा कार्यक्रमका सहभागी एकछिन सोचमग्न भए ।
महाशिवरात्रिको अवसरमा विशाल बजार व्यापार संघले बिहीवार विशाल बजारको प्रांगणमा आयोजना गरेको 'आध्यात्मिक उत्सव अभियान' नामक कार्यक्रममा बोल्दै थिए, केडिया ।
उनले थपे, 'भौतिकवादमा हाम्रो समाजको ध्यान गएको देखिएको छ । नेपाली धर्म संस्कृतिलाई जोगाउन नै यो अभियानको थालनी गरेका हौं । यसमा हामी बौद्ध धर्मलाई पनि साथै लिएर जान्छौं । अब यो अभियानले निरन्तरता पाउँछ ।'
अभियानको मुख्य उद्देश्य विदेशी संस्कृतिमा रमाइरहेको नेपाली युवा पुस्ता र समाजलाई आफ्नो धर्म तथा संस्कृतिमाथि आकर्षण बढाउनु रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता डा. भोला रिजालले युवाहरूलाई पनि अभियानमा सामेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 'विदेशमा यस्तो उत्सवमा 'टीनएजर'को उपस्थिति रहन्छ र नौलो तरिकाले परिस्कृत गर्न सिपालु हुन्छ त्यहाँको युवा पुस्ता, त्यसैले हामीले पनि हाम्रो नयाँ पिंडीलाई यसमा सामेल गराउनुपर्छ र अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,' उनले भने ।
अर्का वक्ता बौद्ध धर्म धर्मगुरु रिम्पोछेले धर्मलाई खोजको रूपमा प्रस्तुत गर्न सके त्यसले देशको विकासमा समेत योगदान गर्ने धारणा राखे ।
'हाम्रो बौद्ध दर्शनलाई युरोपेली मुलुकले आफ्नो पाठ्यक्रममा राखेर विकासमा फड्को मारे,' उनले भने, 'हामीले पनि हिन्दू र बौद्ध धर्मलाई धर्मको रूपमा मात्र नलिई यसलाई खोजको रूपमा प्रस्तुत गर्न सके हाम्रो देशले पनि विकासमा फड्को मार्न सक्छ ।'
कार्यक्रममा नायक निखिल उप्रेती पनि सहभागी थिए । उनले युवा पुस्ताले संस्कृति भुल्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
'हाम्रो दर्शनलाई अनुशरण गर्दै धेरै देश विकसित भए तर हाम्रो आवस्था यस्तो रह्यो कि भगवानको विरोध गर्नुलाई हामीले आफू मोडर्न भएको महशुस गर्न थाल्यौं,' उप्रेतीले भने ।
अहिले अगाडि बढेको आध्यात्मिक अभियानले धर्म र संस्कृतिलाई जोगाउन धेरै मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
बिरामीका लागि अक्सिजन भर्न दिनमा १६ घण्टा खटिने ‘ह...
मास्क लगाउनुहुन्न ? परिएला नि कारवाहीमा ! [हेर्नुह...